Midowga Yurub oo arrimo waaweyni ay sannadkan hor yaallaan
Midowga Yurub ayaa u diyaar goroobaya inuu soo dhoweeyo 1-da bisha May ee foodda inagu soo haysa toban dal oo badankood ay horey uga mid ahaan jireen wadammadii shuuciga ee bariga Qaaradda Yurub. Dalalkan waxay 25 ka dhigayaan tirada wadammada ku jira Midowga Yurub, halkii ay horey uga ahaayeen 15.
Tobanka dal: Poland, Hungary, Jamhuuriyadda Czech, Slovakia, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia iyo labada jasiiradood ee ku yaalla badda Mediterinian-ka ee kala ah Cyprus iyo Malta waxaa ku soo biiritaankooda dabaaldeg weyn loogu sameyn doonaa magaalada Dublin ee Jamhuuriyadda Ireland oo iyadu hadda haysa madaxtinimada lix biloodlaha ah ee wareegta ee Midowga Yurub. Wadammada Romania iyo Bulgaria ayaa la iclaamiyey inay Midowga Yurub ku soo biiri doonaan sannadka 2007.
Faa'iidada ugu weyn ee ku soo biiritaankan waxaa halkan looga arkaa isku furka xuduudaha Qaaradda Yurub iyo adkeynta kobaca dhaqaalaha Yurub oo muujiyey sannadkii dhowaa horukac aad u sarreeya. Lacagta Euro ee ay isticmaalaan badankood wadamada ku jira Midowga ayaa weli ceego ku haysa doollarka Mareykanka.
Dhowr dal oo Yurub ka mid ah oo ay ku jiraan the Netherlands, waxa ay durba shaaciyeen inay ka walaacsan yihiin in dad badan oo shaqaale ah ay kaga soo jabaan Yurubta Bari oo dhaqaale ahaan aan weli lala simi karin Yurubta galbeed. Tobanka dal ee cusub dadkoodu xaq waxay u yeelan doonaan inay Yurub ka degaan meeshay doonaan.
Ku soo biiritaankooda ka hor waxaa la filayey in la saxiixo distoorkii Midowga Yurub oo la isku mari waayey shirkii bishii December, markii Faransiiska iyo Jarmalku ay soo jeediyeen in distoorka lagu xuso inay yeeshaan cod ballaaran. Arrintaas waxaa si adag ugu diiday Spain iyo Poland. Laakiin, shirkii bishii dhoweyd ee March aakhirkeedii ayaa lagu heshiiyey in la billaabo wada-xaajood ku saabsan distoorka.
Ra'iisal Wasaaraha Ireland, Bertie Ahern, waxa uu weydiistay Faransiiska iyo Jarmalka inaysan qaadin wax tallaabo ah oo ay ku majaxaabinayaan midnimada Midowga Yurub illaa iyo inta distoorka laga sii wada hadlayo. Ra'iisal Wasaare Ahern, waxa uu daba taagnaa hadal ka soo yeeray Madaxweynaha Faransiiska, Jacques Chirac oo ku dheeraaday in Faransiiska iyo Jarmalku ay kala soo dhex bixi doonaan Yurub wadamo taageersan oo u codeeya.
Qodobka kale ee ku soo wajahan Midowga Yurub waxa uu yahay doorashooyinkii Baarlamaanka oo lagu wado inay dhacaan bisha June. Waxaa kaloo Yurub hor yaalla arrinta waddanka Turkiga oo sannado badan garaacayey albaabka, si uu ugu soo biiro Midowga. Romano Prodi, Madaxa Midowga Yurub oo booqday Ankara bishii January, waxa uu tilmaamay inay xagaaga soo socda ka wada hadli doonaan in wada xaajood lala furo Turkiga.
Mareykanka ayaa muujiyey sida uu ula safan yahay rabitaanka Turkigu ku doonayo inuu kaga mid noqdo Midowga Yurub, kaddib markii uu Guriga Cad booqday Ra'iisal Wasaare Recep Tayyib Erdogan. Dick Cheney, Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, waxa uu caddeeyey in maamulkoodu taageerayo afkaarta iyo qadiyadda Turkiga.
Sidoo kale, Turkigu waxa uu taageeradaas mid la mid ah ka helay Madaxa Siyaasadda Dibadda Midowga Yurub, Javier Solana, laakiin kula filna oo Midowga Yurub waxa uu ka doonayaa Turkiga inay hagaajiyaan record-kooda xuquuqda aadanaha, waxna ka qabtaan walaaca la xiriira awoodda dheeriga ah ee ay madaxda ciidammadu waddankaas ku leeyihiin, kuwaas oo isu haysta ilaaliyeyaasha dhabbihii uu jeexay Mustafa Kamal Ataturk oo ahaa ninkii is beddelka ku sameeyey waddanka Turkiga sannadkii 1923-kii.
Dhibaatada kale ee Turkiga haysataa waxa ay tahay isagoo ah waddan Muslim ah oo 70-ka milyan ee ku nool ay haystaan badankood diinta Islaamka, halka Yurub inteeda badani ay ka haystaan Christian. Dowladda Silvio Berlusconi ee waddanka Talyaaniga ayaa soo jeedisay in distoorka Yurub lagu xuso in diinta rasmiga ahi tahay Masiixiyadda oo qura.
Hase ahaatee, falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ee jooga Brussels waxa ay leeyihiin Midowga Yurub waa inuusan u muuqan naadi diimeed ee uu noqdaa xayndaab siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Waxaa kaloo miiska yaalla sida wax looga qabanayo muranka iyo shakiga soo kala dhex galay Midowga Yurub iyo Mareykanka ee ku saabsan arrinta Ciraaq.
Yurub, waxaa kaloo ay ku dadaalaysaa inay iska kaashato argagixisada illaa markii ay dheceen qaraxyadii Madrid. Waxaa kaloo la filayaa inay soo baxaan is beddelo lagu sameeyo kaararka caafimaadka ee wadammada qaar oo weli adeeggooda caafimaadku uu aad qaali u yahay. Si kasta ha ahaatee, waxaad mooddaa in howlo adagi ay Midowga hor yaallaan.
Faafin: SomaliTalk.com | April 18, 2004